Ihe 5 dị mkpa sitere n'ike mmụọ nsọ 2012 - Geofumadas
Ndị na-agbaso akaụntụ ahụ na Twitter @geofumadas O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala ụbọchị abụọ zuru ezu maka akara # BeIn2012. Iji melite ọdịnaya dị elu n'ime ụbọchị atọ, nke a bụ nchịkọta nke ihe 5 dị iche na nke sitere n'ike mmụọ nsọ:
1. Ihe kacha adọrọ mmasị oru ngo
Site na 57 finalist oru, usoro nke ụmụ nwoke Azerbaijani mere nke m ga-ekwenye, o juwo m anya nke ukwuu, o juru m anya. Ha ejirila VBA zụlite na PowerDraft (ụdị akụ na ụba nke Microstation), na-enweta ihe ochie site na XFM (onye buru uzo I-model), iji wepuga njiri mara nke ihe ndia emeputara na DGN, ijikwa ha site na PostGIS, nke a:
A na-ewu ihe
A na-enyocha njiri oghere na ijiji
A banyerela akụkụ nke akara
Ihe niile dabara na ebe nchekwa data PostGreSQL
Ijikwa ihe site na PostGIS na-enweghị ndagideỌchịchị Gọọmenti
Edere ya na mmepe doro anya na MapGuide OpenSource
Ọ bụ ezie na anyị amaghị na ha ga-emeri, anyị maara na ha ga-erigbu mmepe a n'ihi na ruo ugbu a ọtụtụ ndị ọrụ anaghị achọ iji GeoWeb Publisher ma ọ bụrụhaala na ụdị idpr bụ ụdị mgbanwe weebụ yana Geospatial Server na-anọgide na ọnụahịa nke enweghị uche. Na mkpokọta GIS maka Bentley bụ mgbakwunye maka ndị ọrụ GeoEngineering ma ọ bụghị akara kwụ ọtọ.
2. M-ụdị, Bentley si BIM
Bentley na-ekwusi ike na ịkwalite usoro anwụrụ ya, nke enwere ike ịpụta site na ngwa ndị a na-ahụkarị dịka Office, PDF ndị na-agụ, iPad, Revit na Civil3D. Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ụdị «dozieNke XML agbakwunyere na maapu, ga - ejedebe ịbụ ọkọlọtọ nke ga - etinye uche na njikwa data yana ga-eme DGN digestible maka sọftụwia asọmpi na ndị ọrụ anaghị aka nka.
Imirikiti ihe ndị na-adịbeghị anya nke Bentley mere mgbe V8i gbadoro anya ịzụta teknụzụ ọhụụ kama ọ bụ ndị ahịa nwere ike iji mmepe nwere ike ime ka ihe nlereanya nke I. Ọ dị mma ugbu a ịhụ ezigbo ihe atụ dị na arụmọrụ site na echiche, ụkpụrụ ụlọ, nhazi, gburugburu ebe obibi, ọdịdị ala na imewe ihe eji achọpụta ihe n'ime ihe ndị dị ndụ n'ezie.
N'ihe karịrị otu ụzọ ha sirila mee ezi nkpọkọ n'ụdị dwg na afọ a gbakwunyere usoro ọhụrụ. Na, nke ụdị 7 nke gara aga ka oge izu 16 dị, Bentley mepụtara DGN V8 naanị na-awụlikwa elu gaa na 32 ibe ma hapụ ya njikere ka ndị 64 ibe wee nwee ike imeghari na njirimara site na I-nlereanya. Nnukwu mkpebi nke anaghị ata ahụhụ maka nsụgharị, mbipụta nke ga-akpachapụ anya tupu asọmpi ahụ.
3. JIKỌ, Bentley Dropbox
Bentley na-akwado usoro ohuru nke ihe a maara dị ka Bentley SELECT, wepụtara na 1994. Ugbu a ọ ghọrọ ebe nchekwa na ụdị mmekọrịta Dropbox ụdị, na-eme ka ọdịnaya dị na igwe ojii, ngwa ekwentị na Intranets.
4. Mobile dị ka etiti isiokwu
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya n'ihi na ọ dị ire, mana ọ masịrị anyị mkpa ha nyere ya n'oge a. Ya mere, anyị na-ahụ ProjectWise na AssetWise kekọtara ọnụ site na ngwa ngwa. N'afọ gara aga, ha gosiri anyị banyere iPad, ugbu a gbasara Android na Windows Mobile n'ụdị Tiles UI.
SDK na-ekwe nkwa, ntinye aka na nnukwu usoro atọ ahụ, njikọta Trimble ji ọsọ, ike nke Descartes ya na Itara / Pointools gbakwunyere na ngosipụta ndụ na-egosi ihe akara nke ihe omume a na-anọchi anya: Njikọ ekwentị.
5. Bentley Utilities Designer, GIS etinyere na netwọkụ
Nke a bụ ụdị PowerDraft / PowerCivil nke dabere na sistemụ netwọk jikọtara na ihe enwere ike itinye n'ọrụ ọrụ hydrosanitary, sistemụ njem ụgbọ elu na ike Bentley Map iji sie ọnwụ na-egbu ngwa ma jiri ya na-eme ụdị ihe ngosi. .
Na mmechi, Nnukwu Gbaa Ike na nke atọ a na-eme na Amsterdam, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na SPAR Europe na Hague. Oge a na nkwari akụ dị n'akụkụ nkuku site na ndị njem nleta na-adọrọ adọrọ. Na otu Cannabis n'ike mmụọ nsọ si folks na Bentley, na-ahụ ihe ga-eme na 5 afọ, na-agbadoro maka usoro azụmahịa ogologo oge ọrụ.
Previous Post«Previous Osisi ala Oktoba bu njikere ugbu a
Next Post Otu abalị na Be Inspired AwardsNext »